नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाको अध्यक्षमा सिलवाल विजयी « News24 : Premium News Channel
नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाको अध्यक्षमा सिलवाल विजयी
विराटनगर ६ माघ । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाको नयाँ नेतृत्वमाअध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचित भएका डाक्टर सिलवालले ३६१ मत ल्याउनु भएको छ भने उहाका प्रत्यासी उम्मेद्वार डाक्टर श्रेष्ठले २७१ मत ल्याउनु भएको छ । सोमबार राति सार्वजनिक भएको निर्वाचनको मत परिमाण अनुसार सिलवाले प्रतिस्पर्धी डा.कैलाश श्रेष्ठलाई ९० मत अन्तरले पराजित गर्नु भएको छ । संघमा श्रेष्ठ समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र एक जना सदस्य गरि तीन जना पदाधिकारी बाहेक सबै पदमा सिलवाल पच्छको समूह निर्वाचित भएका छन् ।
संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहबाट डा। सन्जिब कुमार ठाकुरले ३ सय १८ मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी डा. नविन कर्णले ३ सय २ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपाध्यक्षमा डा. बालकृष्ण साहलाई २५ मत अन्तरले हराउँदै डा. यज्ञराज खरेल निर्वाचितहुनुभएको छ । खरेलले ३ सय २२ मत प्राप्त गर्दा साहले २ सय ९७ मत ल्याउनु भएको छ ।
महासचिबमा डा. राजेन्द्र चौधरी निर्वाचितहुनुभएको छ । चौधरीले ३ सय ५१ मत ल्याएर विजयी हुँदा डा. रविराज सिंहले २ सय ७५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । कोषाध्यक्षमा डा. सुधिर श्रेष्ठले ३ सय १० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सिलवन्त सेन श्रीवास्तवे ३ सय ६ मत ल्याउनु भएको थियो । सहकोषाध्यक्षमा डा. जुबिन सिलवालले ३ सय ८० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ । उनका प्रतिस्पर्धी डा. सरवेस कुमार झाले २ सय ४८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सहसचिवमा सुनिल रेग्मीले ३ सय ६८ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी २ सय ५९ मत ल्याउनु भएको छ । सदस्यहरूमा डा. रोशन खड्का ३ सय १७, डा. अमर कुमार यादवल ३ सय २५, डा. अरबेन्द्र कुमार महतोले ३ सय २५, डा. अन्जु देवले ३ सय ९३, डा. पार्थ गुरागाईले ३ सय १८ र प्रेरणा दाहालले ३ सय ५० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ ।